Tantara vaovao ho an'i Gentoo | Avy amin'ny Linux | ChrisADR | Avy amin'ny Linux
Tantara vaovao ho an'i Gentoo
ChrisADR | | About us
Tamin'ity herinandro ity, toy ny mahazatra, ny lisitra fandefasana mailaka Gentoo dia feno resaka momba ny ho avin'ny fizarana, ary ny iray tamin'izy ireo dia nahasarika ny saiko, hatramin'ny foto-kevitra ijoroan'ity lahatsoratra ity. Nefa alohan'izay dia hahalala tantara kely momba ny fizarana isika:
1 Mpamorona anao
4 Fitantanana ny fiaraha-monina
8 Hita ny fahasimbana
9 Ny fitsapana farany, ireo taona
10 "Drafitra ho an'ny Gentoo"
11 Mianara amin'ny tantara
Miverina amin'ny taonina farany isika, tamin'ny 1999, Daniel Robbins, namoaka ny kinova Enoch Linux voalohany, fizarana iray izay te-hanaraka ireo fenitra hatrizay notontosain'ny fizarana hafa rehetra, namorona fonosana fa tsy nandray azy ireo mialoha. Ny hevi-dehibe dia ny famoronana rafitra iray mahazaka ny fitaovan'ny mpampiasa ary tsy manana fonosana tsy ilaina.
Taorian'ny olana vitsivitsy tamin'i Enoka dia nifindra tany i Daniel FreeBSD, rafitra fiasa UNIX, ary teo no nihaonany Seranana fitaovana fanaraha-maso fonosana ny rafitra. Araka ny azonao an-tsaina, ny seranan-tsambo dia tompon'andraikitra amin'ny fananganana ireo programa fa tsy ny fahazoana mimari-droa, noho izany dia ampiasaina ny fitaovana pkg.
Efa tamin'ny taona 2002, rehefa avy nametraka ilay bibikely sarotra saro-pantarina, dia efa nahazo ny anarany ofisialy i Gentoo, nomena anarana taorian'ny karazana penguin haingana indrindra, ary naneho an'izao tontolo izao ny kinova ofisialy voalohany. Ity dingana lehibe ity no dingana voalohany tamin'ny fanovana sy fanovana lava niseho nandritra ny taona maro, saingy hifantoka amin'ireo zava-dehibe indrindra izahay.
Fitantanana ny fiaraha-monina
Ity dia singa miavaka ao Gentoo, satria tsy misy orinasam-pandraharahana mihazakazaka, ny vondrom-piarahamonina no manapa-kevitra farany ho an'ny mpampiasa sy ny mpampiasa farany. Fa tsara ny manamarika fa ireo orinasa lehibe toa an'i Sony sy Google dia nampiasa ny paradigma Gentoo hanatsarana ny rafitr'izy ireo.
Ity dia taona sarotra indrindra ho an'i Gentoo, satria ny mpanorina azy dia tsy maintsy nanolotra ny fitantanana ny Gentoo Foundation noho ny olany manokana. Noho ny fipoahan'ny lazan'i Gentoo tamin'izany fotoana izany dia nanomboka nampiasa bebe kokoa ny olona ny Gentoo ary toa nampanantena ny isany, saingy ny fitomboana haingana dia sarotra noho izany ny nampifanaraka ny rafitra tamin'ny maridrefy marina. Tadidio foana fa maro amin'ireo tetik'asa ireo dia tanterahina amin'ny "fotoana malalaka", ny fipoahana laza dia tsy ho tsara raha tsy misy olona ampy hifehy ny volo.
Taona sarotra iray hafa, satria noho ny tsy fisian'ny firafitra sahaza azy, ary miaraka amina karazana andiana guerilya anatiny, nilentika tao amin'ny tontolon'ny GNU / Linux i Gentoo ary nanjary fizarana "ambaratonga faharoa". Amin'ity tontolo ity dia nanapa-kevitra i Daniel fa hiverina amin'ny fampandrosoana mavitrika amin'ny maha developer azy, saingy taorian'ny fahasamihafana sy fanafihana maro samy hafa nataon'ny roa tonta dia nanapa-kevitra ny hiala sasatra izy aorian'ny fidirany indray. Fotoana fohy taorian'izay Funtoo Linux, distro miorina amin'ny Gentoo, saingy misy fanovana tena ilaina izay tsy naharesy ny firafitra tsy milamina tamin'izany fotoana izany.
Gentoo Linux Enhansion Proposal (GLEP) dia antontan-taratasy izay manolotra fanovana, na ara-teknika na ara-drafitra, ho an'ny fiarahamonina. Ny GLEP dia mandalo dingan-dàlana fanomanana, famerenana, fandatsaham-bato ary mety hampiharina na tsia, miankina amin'ny filan'ny fiarahamonina sy ny fahaizan'ny volavolan-kevitra. Manokana, ny GLEP 39 dia tetik'asa te hampihatra rafitra vaovao ho an'ny Gentoo Linux, izay anaovana ny famaritana ny filaharana sy ny fomba fizotran'ny tetikasa sy mpamorona maro. Nanomboka ny taona 2005, ary nanohy ny fizotrany mandrapahatongan'ny fankatoavana azy tamin'ny taona 2008. Azo antoka fa valin'ny fiarahamonina izany, na ny developer na ny mpampiasa, ny manatsara ny olana ara-drafitra sarotra nisy teo aminy nandritra ny taona maro.
Hita ny fahasimbana
Tamin'ity fotoana ity, i Gentoo dia efa nijaly mafy tamin'ny mpiady anaty akata anatiny sy ny tsy fahampian'ny fitarihana. Mpampiasa sy mpamorona maro no efa nisotro ronono ary nanjary tetikasa kely miandry ny fahafatesany. Fa ny zavatra mahagaga dia na eo aza ny zava-drehetra, ary manohitra ny mety rehetra, ny andiana fiovana nahatonga an'i Gentoo hanana rafitra milamina kokoa, ary koa noho ny fihenan'ny mpamorona sy ny mpampiasa (fomba fijery mety mifanohitra amin'ny fotoana fampandrosoana) ianao dia afaka manomboka miasa amin'ny tetikasa vaovao ary manatsara ny Gentoo amin'ny fotony.
Ny fitsapana farany, ireo taona
10 taona no lasa nanomboka io fotoana io, ary be ny niova, ary ny zavatra hafa tsy dia be loatra, ny rafitra nofaritana tamin'izay dia efa natsangana, ary betsaka ny zavatra nianarana nandritra ny dingana, tonga ny mpandraharaha vaovao ary ny hafa nanatevin-daharana. Raha fintinina, tsy maty i Gentoo (mahagaga). Ary ity fahendrena vaovao ity dia hita taratra amin'ny endrika sy maodelim-pifidianana, famahana olana, fampisehoana tetikasa, raha fintinina dia efa nanapa-kevitra izy ireo. Ary ity dia mitondra antsika amin'ity herinandro ity indray.
"Drafitra ho an'ny Gentoo"
Ity no lohateny avy amin'ny kofehin-dresaka nahatonga an'ity lahatsoratra ity, na dia mbola tsy eo aza ireo hazo feno, dia somary tamin'izay nitranga io. Te handray anjara amin'ny tetikasa i Daniel, hanangana fifandraisana bebe kokoa eo amin'i Gentoo sy Funtoo, ary hamaha olana miavaka sasany amin'ireo tetik'asa isam-pokontany.
Ity dia resahina ao anaty lisitra, ary ny tsapa voalohany dia ny hoe te hiverina i Daniel fa tsy ny mavitrika ary noho izany dia manampy ny mpitondra Gentoo (amin'ny maha mpikambana ao amin'ny filankevitra). Ho an'ity dia efa mandray ny quiz an'ny mpamorona ianao tsy misy fidirana an-tsitrapo, izay andiana dinidinika maromaro atao amin'ny alàlan'ny IRC eo amin'ny mpikarama iray Gentoo (mazàna mpamorona) sy ny mpangataka. Amin'ireto dinidinika ireto dia dinihina tsirairay ireo fanontaniana amin'ny quiz, izay manodidina ny firafitry ny fiarahamonina vaovao, ny fomba hirosoana, ny fomba fanolorana hevitra ary ny fomba fanamboarana zavatra.
Toy ny fanamarihana fanampiny, dia misy quiz natao manokana hananana fidirana amin'ny fidirana, midika izany fa afaka manitsy mivantana ireo fisie .ebuild inona no hitranga .deb o .rpm amin'ny debian na redhat tsirairay avy. Mafy kokoa noho izany ny olana teknika sy ny fizotry ny fikolokoloana ny programa.
Raha te hitarika ny tafatafa dia ilaina ny mampianatra azy amin'ny mpamorona Gentoo, izay manazava ny fizotrany amin'ny mpangataka sy mitarika azy ireo amin'ny alàlan'ny fizotran'ny valiny (voarakitra an-tsoratra tsara ny zava-drehetra ka afaka atao raha tsy misy mpanoro hevitra. , saingy ilaina ny manana miaraka amin'ny iray mba izy no mangataka mpanadihady).
Mianara amin'ny tantara
Tsy mihevitra ny tenako ho tia tantara aho, saingy nianatra aho fa ilaina ny fahalalana azy raha tsy te hanao fahadisoana mitovy isika, ary toy ny fandaharana, ny fahalalana ny zava-nitranga taloha dia mampianatra antsika hahatakatra bebe kokoa ny ho avy. Ity dia ho lohahevitra tsy tapaka ao amin'ny lisitra fandefasana mailaka any Gentoo mandritra ny andro vitsivitsy na herinandro maromaro, ary antenaina fa ho tsara kokoa, satria tsy mandeha ny taona ary samy manana ny traikefan'ny taona ny roa tonta. Farany, mitady zavatra mitovy daholo isika rehetra, mba hananganana Gentoo tsara sy tsara kokoa hatrany. Miarahaba sy misaotra tonga eto 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Tantara vaovao ho an'i Gentoo
Lahatsoratra tena tsara, miarahaba anao aho.
afo kintana dia hoy izy:
Valiny amin'ny kintana
Jose J Gascón dia hoy izy:
Raha nisafidy araka izany ny sokajy politika sy toekarena, dia tontolo hafa no ho azo atao, raha tsy misy kapitalisma masiaka (Friedmanites) ary miaraka amin'ny fahitan'ny Keynes ny fanjakana fifanampiana.
Lahatsoratra tena tsara hatreto no nahafantarako ny fomba fiasan'ny Gentoo, ary tsy mora velively.
"Mandeha làlana izy ireo rehefa mandeha" an'i Machado.
Valiny tamin'i José J Gasikon
Ahoana ny hevitrao momba an'i Funtoo ary inona no fantatrao momba ny antony nahatonga an'i Daniel hamorona ilay distro (Funtoo).
Novakiako fa tao amin'ny Microsoft izy saingy niverina tany Gentoo izy ary tsy niditra tao amin'ilay tetikasa ka dia nanapa-kevitra ny hahita Funtoo izy.
Izany antsipiriany izany dia nahatonga ahy hiahiahy foana.
Te hahafantatra aho raha nampiasa Funtoo ianao ary inona ny fiheveranao sy ny tsy fitovizanao amin'i Gentoo.
Lahatsoratra tsara! toy ny mahazatra 🙂
Marina izany, tao amin'ny Microsoft i Daniel, noho ny antony ara-dalàna amin'ny asa, araka ny nambarany tamin'ny fotoana iray: "Ny hevitra dia ny hampianarana an'i Microsoft ny fomba fiasan'ny rindrambaiko malalaka sy loharano malalaka. Rehefa avy namaha ny olany manokana nahatonga azy hiala voalohany tao Gentoo izy dia nanapa-kevitra ny hifandray indray amin'ny vondrom-piarahamonina izy, saingy tamin'io fotoana io dia somary somary henjana ihany ny toe-draharaha, miaraka amin'ireo mpandraharaha manahirana sasany. Ny fifandonana sy ny fanafihana manokana dia nahatonga ny toe-javatra nanjary henjana kokoa. Tamin'ny fotoana fohy dia nanapa-kevitra ny handao ny vondrom-piarahamonina "feno fankahalana" i Daniel ary nahita kinova vaovaon'ny Gentoo ... Funtoo dia nisy fiovana ara-drafitra tamin'ny portage sy ny fizotrany hafa, "fanatsarana" hoy ny sasany. Ity fizotry ny fanovana schema na firafitra amin'ny tetikasa misokatra ity dia sarotra indraindray, ary ny fiezahana handresy lahatra vondrom-piarahamonina iray dia tsy mandeha tsara foana Androany, mandray anjara tsy tapaka amin'ny fampandrosoana ny Portage i Daniel ary anio dia hisy fivoarana vaovao andrasana ao amin'ny mpitantana fonosana Gentoo.
Tsy nanandrana an'i Funtoo manokana aho, nandre zavatra tsara momba ny fizarana. Ny fahasamihafana amin'izao fotoana izao dia mety ho ny rafitra sy ny làlan'ny tetikasa, ny laharam-pahamehan'ny Funtoo dia voamarina ao amin'ny tranokalany, andiana laharam-pahamehana izay mitarika ireo tetikasa.
Manantena aho fa afaka manazava ny fisalasalana kely 🙂
Mieritreritra ve ianao fa tena sarotra amin'ny mpampiasa ny mikarakara isan'andro ny gentoo? Izany no ilazako azy satria, toa ary avy amin'ny tsy fantatra, toa ho an'ny mpampiasa mahazatra, fa tsy mpandahatra fandaharana na mpianatry ny linux GNU, ny gentoo dia manana fahasarotana goavana mitazona azy hanavao sy tsy hisy olana, mametraka vavahady be dia be ny portage, compilations maka fotoana, dia toa ny distros mimari-droa hafa na dia somary tsy dia mahomby aza izy ireo dia taona vitsivitsy miala amin'ny resaka fahamoram-panahy.
Noho izany ny lahatsoratra manaraka momba ny gentoo dia ny fomba hitazomana ny gentoo rehefa apetraka.
Valiny fohy: Tsia, heveriko fa tsy dia sarotra ho an'ny mpampiasa "normal" izany.
Marina fa maranitra ny fihodinan'ny fahasarotan'i Gentoo (mampatsiahy kely ahy izy tamin'ny vao nahalala an'i Vim), saingy izany dia noho ny GNU / Linux mandalo dingana iray amin'ny "manafina" fahasarotana. Ny hoe sarotra ny zavatra iray dia tsy maharatsy azy, ny mifanohitra amin'izany, ny fanesorana ny fahasarotan'ny zavatra iray dia mahatonga azy io ho ratsy, nefa jereo ny Windows 🙂 Ny fahasarotana miafina dia ratsy kokoa noho ny zavatra hafa rehetra satria lasa miankina amin'ny mpampiasa.
Ankehitriny, izaho, anio dia tsy mila mandidy baiko roa fotsiny aho mba hitazomako mihazakazaka eo amin'ny sampana tsy miovaova (andrana) indray mandeha isan-kerinandro, na isaky ny 3 andro raha toa ka be ny fiovana:
mipoitra -avuD @world
na ny mitovy aminy
mipoitra –mangataka –pihavanana –fanatsarana –deep @ izao tontolo izao
Ny voalohany dia mandrindra ny tahiry (toa ny fanavaozana ny #apt)
Ny faharoa dia manavao ireo programa rehetra napetrako miampy ny fiankinan-dry zareo (fanavaozana ny #apt)
Tamin'ny voalohany dia mazava fa somary sarotra ny mahatakatra ny vaovao, sy ny lesoka, saingy raha vao nesorina ilay fahasarotana voalohany dia manomboka misy dikany kokoa ny zavatra ary hita bebe kokoa. (Nandiso ny fitaovako imbetsaka aho, voatery nametraka avy hatrany, saingy isaky ny lesoka dia nisy lesona tena lehibe nanjary 🙂)
Ary io dia tsy vitan'ny hoe manampy ny mpampiasa "ara-dalàna" hialana amin'ny fiankinan-doha, fa mampianatra azy zavatra ao anatin'ilay dingana izay tena fototry ny GNU / Linux, tena fahalalahana.
Raha ny momba ity farany dia marina fa ny fizarana mimari-droa dia tsotra kokoa, ho an'ny "mpampiasa." Ary amin'ny lafiny sasany, raha hampiasa Gentoo dia tsy maintsy manana tanjaka manokana amin'ny teknolojia ianao, na tena mila fahombiazana. Ary izany koa dia zavatra mahafinaritra momba ny GNU / Linux 🙂 afaka misafidy ny ambaratonga mifanaraka amin'ny zavatra ilainao ianao 🙂 Tsy manandrana manafina ny fahasarotan'ny rindrambaiko i Gentoo, ny mifanohitra amin'izany aza dia mampianatra ny mpampiasa ny fahasarotana hahafahany manapa-kevitra izay hatao amin'ny sombin-javatra tsirairay, izany dia zavatra iray izay mitondra andraikitra, fa rehefa voafehy, dia manome fahafaham-po bebe kokoa 🙂 farafaharatsiny mahatsapa ho tsara kokoa ny fahafantarako izay tena ananako ao amin'ny ekipako, ary ny fomba ananako izany, ary ny antony ananako izany. 🙂
Tany am-piasana dia nametraka anay Windows 10 izahay, nampiasa gnome tao an-trano nandritra ny 4 taona tsara aho, toa mahatsiravina ho ahy ny windows 10, inona koa, amin'ny tranga manokana misy ahy, ny olana amin'ny fahitako dia namboariko tsara kokoa ny manjaro gnome noho ny windows 10 miaraka amin'ny privatera lehibe kokoa.
Alvarito05050506 dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, talohan'ny nahitako ny lahatsoratrao dia tsy fantatro akory hoe nisy i Gentoo ary izao dia hanova ny tenako avy any Raspbian mankany Gemtoo aho. MANKASITRAKA!
Valiny tamin'i Alvarito05050506
Chamilo LMS: E-mianatra ho an'ny rehetra